Ngo-2019, imboni yezokuphikisa izothuthukisa futhi izinguquko ezihlelekile zokuhlinzekwa ngezinsizakalo. Ukusebenza okuphelele kwemboni kuzinzile, umphumela ukhuphuke kancane, futhi nezinga lokuthuthuka okuluhlaza selithuthukisiwe kakhulu.
1. Ukuphuma kuqinile futhi kuyakhuphuka. Ngo-2019, umkhiqizo wemikhiqizo yokuphikisa ezweni lonke wawungamathani ayizigidi ezingama-24,308, ukukhuphuka konyaka ngonyaka ngamaphesenti angama-3.7. Phakathi kwazo, imikhiqizo ebunjiwe eyakhiwe njengama-Reflexory yayingamathani ayizigidi eziyi-13.414, ukukhuphuka kuka-1.1% unyaka nonyaka; imikhiqizo yokuphikisa yokufakelwa yayingamathani angama-589,000, ukukhuphuka kuka-8.9% unyaka nonyaka; imikhiqizo yokuphikisa engavulekile ibingamathani ayizigidi eziyi-10,305, ukukhuphuka kuka-6.9% unyaka nonyaka.
Okwesibili, ingcindezi yenzuzo inkulu kakhulu. Kunezinto zokusetshenziswa ezibandayo ezi-1958, imikhiqizo yokuphikisa nezinkampani zensiza ezihlobene ngaphezulu kwesilinganiso sezimboni. Kuthinteke ukwehla okukhulu kwentengo yemakethe yemikhiqizo ephikisayo, imali ephambili yebhizinisi ngonyaka ka-2019 yayingu-206.92 billion yuan, ukwehla ngonyaka ngonyaka ngo-3.0%, kanti inzuzo isiyonke yayingu-12,80 billion yuan, ngonyaka ukwehla ngo-17,5%.
3. Izimpahla ezithunyelwa kwamanye amazwe zawa kancane. Ngo-2019, umthamo wokuthengisela izinto zokuthunyelwa ngaphandle kwezinto zokuthengisa kanye nemikhiqizo wawungamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-3.52 amadola aseMelika, kanti inani eliphelele lonyaka lokuthumela lalingamathani ayizigidi eziyi-5.95, ukwehla konyaka nonyaka ngamaphesenti ayi-6.3. Phakathi kwazo, umthamo wokukhipha kwezinto zokusetshenziswa okuluhlaza okwesabekayo wawungamathani ayizigidi ezingama-4,292, ezansi ngaphansi kuka-5.7% unyaka nonyaka; umthamo wokuthumela ngaphandle kwemikhiqizo yokuphikisa wawungamathani ayizigidi eziyi-1.666, phansi kuka-7.7% unyaka nonyaka.
4. Ukuthuthukiswa kwamazinga aluhlaza. Ngo-2019, imboni yonke izothuthukisa kakhulu ukulawulwa kwemithombo yokungcola, futhi izifundazwe eziningi namadolobha sikhiphe izinsiza zezimboni kanye nezinhlelo zokwelapha ukungcola komoya okugcolisayo ukugqugquzela ukuphuma kwezingcolile ukuze kuhlangatshezwane namazinga. Izinga lenkampani eliluhlaza luthuthukisiwe kakhulu. Amafektri ayisikhombisa aqokiwe abe “amafektri aluhlaza” nguMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi. “Uhlu.
Njengamanje, ushintsho kanye nokuthuthuka komkhakha we-Refractory kuyashesha, kepha lesi simo sisabhekene nokungaqiniseki okuningi. Izinkinga ezinjengokweqisa, ukugxilisa ingqondo okuncane, namandla akwanele okuqhamuka. Isinyathelo esilandelayo ukusheshisa ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha nokuthuthukiswa komkhiqizo omusha, sincike emfuthweni namandla emikhiqizo ukukhulisa ukugxila embonini, ukuthuthukisa ukusebenza kwezezimboni nezobunhloli, ukusheshisa ijubane lokuguqulwa nokwenziwa ngcono, kanye nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu imboni yokuphikisa.
Isikhathi sokuthumela: Meyi-21-2020